ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကော်ဖီ | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပင်​ပန်းနွမ်းနယ်​လာတဲ့အခါ ​ကော်​ဖီပူပူ​လေးတစ်​ခွက်​ ​သောက်​လိုက်​ချင်​စိတ်​ဖြစ်​​ပေါ်လာတာဟာ လူတိုင်းဖြစ်​​လေ့ရှိတဲ့ ​တောင့်​တချက်​တစ်​ခုပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ကော်​ဖီဟာ စိတ်​ကိုလှုပ်​ရှားတက်​ကြွ​စေတတ်​တဲ့ အရာတစ်​ခုဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ စွဲလန်း တတ်​ပါတယ်​။ အိမ်​မှာ၊ အလုပ်​မှာ စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေ များလာတဲ့အခါ​ ကော်​ဖီ​သောက်​ချင်​စိတ်​ကို လှုံ့​ဆော်လာပါတယ်​။
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​မှာ ​ကော်​ဖီ​သောက်​သင့်​မ​သောက်​သင့်​ဟာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ ဒွိဟဝိဝါဒတစ်​ခု ဖြစ်​လာပါတယ်​။ က​လေးကိုလည်း မထိခိုက်​​စေချင်သလို ​ကော်​ဖီကိုလည်း မဖြတ်​နိုင်​ ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။
>> ​ကော်​ဖီ​သောက်​ခြင်းဟာ ကိုယ်​ဝန်​ကို ဘယ်​လိုထိခိုက်​နိုင်​သလဲ?
ကဖိန်းဓာတ်​ဟာ ​ကော်​ဖီရဲ့အဓိကပါဝင်​ပစ္စည်း ဖြစ်​ပြီး နှလုံးနဲ့​သွေး​ကြော​တွေကို ထိခိုက်​​စေတတ်​သလို အများအပြား​သောက်​သုံးတဲ့အခါ ကင်​ဆာ​ပြောင်းလဲမှု​တွေ ဖြစ်​​စေလာနိုင်​ပါတယ်​။
Polyphenolဆိုတဲ့ဓာတ်​ဟာ ကိုယ်​ခန္ဓာရဲ့ သံဓာတ်​စုပ်​ယူနိုင်​စွမ်းကို တားဆီး​ပေးပြီး ​သွေးအားနည်း​စေနိုင်​ပါတယ်​။
• ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျ​စေခြင်း : ကိုယ်​ဝန်​အစပိုင်းကာလ​တွေမှာ ​ကော်​ဖီအများကြီး​သောက်​ခြင်းက ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျ​စေနိုင်​ပါတယ်​။
• က​လေးကြီးထွားမှုနှုန်း​နှေး​စေခြင်း : ကိုယ်​ဝန်​​နှောင်းပိုင်းကာလမှာ ​ကော်​ဖီအများအပြား​သောက်​ခြင်းဟာ က​လေးကြီးထွားမှုကို ​နှေး​စေနိုင်​ပါတယ်​။
• ​သွေးအားနည်းခြင်း : ​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ် ​ကော်​ဖီ​သောက်​သုံးခြင်းက ​သွေးအားနည်း​စေနိုင်​ပြီး ​သွေးအားနည်းခြင်း​ကြောင့်​ ကျန်းမာ​ရေးဆိုးကျိုး​တွေ၊ ​နောက်​ဆက်​တွဲ​တွေ အများအပြားဖြစ်​လာ​စေနိုင်​ပါတယ်​။
>> ​ကော်​ဖီကို လုံးဝစွန့်​လွှတ်​လိုက်​သင့်​သလား?
မလိုပါဘူး။ ပုံမှန်​ပမာဏအတိုင်းသာ​သောက်​မယ်​ဆိုရင်​ ​အန္တရယ် မရှိပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်​သူ​တွေက​တော့ တစ်​​နေကို ကဖိန်း ဓာတ်​ ၂၀၀မီလီဂရမ်​ခန့်​ (၂၀၀မီလီလီတာ ၂ခွက်​ခန့်​) ​သောက်​သုံးနိုင်​တယ်​လို့ ဆိုကြပါတယ်​။ ခွက်​ကြီး​လေ​လေ ​ကော်​ဖီပိုများ​လေ ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ ​​ခွက်​ပမာဏကိုလည်း ကြည့်​သင့်​ပါတယ်​။
​ကော်​ဖီအမျိုးအစားနဲ့ ​ဖျော်​နည်းကလည်း အ​ရေးပါပါ​သေးတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​မှာ ​ကော်​ဖီ​သောက်​တဲ့အခါ
• နှပ်​​ကော်​ဖီထက်​ အသင့်​​ဖျော်​ကို ပို​သောက်သင့်​ပါတယ်​။
• ပုံမှန်ကော်​ဖီထက်​ ကဖိန်းဓာတ်​မပါတဲ့​ကော်​ဖီကို ​ရွေးချယ်​ပါ။
• အကြာကြီးနှပ်​ထားတဲ့ ​ကော်​ဖီမှာ ကဖိန်းဓာတ်​ပိုများတာ​ကြောင့်​ ​ရှောင်​ကြဉ်​သင့်​ပါတယ်​။
>> ကဖိန်းဓာတ်​ပါတဲ့​ အခြား​ဖျော်​ရည်ဘာရှိ​သေးသလဲ?
လက်​ဖက်​ရည်​ : ​လက်​ဖက်​ရည်​မှာ ​ကဖိန်းဓာတ်​အနည်းငယ်​ပါပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အနည်းငယ်​မျှ​သောက်​ခြင်းက ဓာတ်​တိုးဆန့်​ကျင်​ပစ္စည်း​တွေပါတာ​ကြောင့်​ အကျိုးရှိ​ပေမယ့်​ အများကြီး​တော့ မ​သောက်​သင့်​ပါဘူး။
ကိုလာ : ​ကိုလာမှာ ကဖိန်းဓာတ်​အပြည့်​ပါတာ​ကြောင့်​ ​ရှောင်​ရှားသင့်​ပါတယ်​။
ကာဗွန်​ပါတဲ့အချိုရည်​များ : ဂတ်​စ်​ပါတဲ့အချို ရည်​​တွေ၊ ဆိုဒါ​တွေနဲ့ ဘာအန္တရာယ်​မှမရှိဘူးလို့ထင်​ရတဲ့ သံပရာ​ဆိုဒါ​ရည်​​တွေမှာ​တောင်​ ကဖိန်းဓာတ်​​တွေ ပါဝင်​​နေတာ​ကြောင့်​ ဒီအချိုရည်​​တွေ​သောက်​မယ့်​အစား သံပရာရည်​လတ်​လတ်​ဆတ်​ဆတ်​​သောက်​ပါ။
​ချော့ကလက်​ : ​ချေ့ာကလက်​မှာလည်း ကဖိန်းဓာတ်​နည်းနည်းပါဝင်​တာ​ကြောင့်​ ​ချော့ကလက်​ပါတဲ့ ​ချော့ကလက်​​တောင့်​​တွေ၊ သကြားလုံး​တွေ၊ ​ရေခဲမုန့်​၊ ​ပေါင်​မုန့်​ကိတ်​မုန့်​​တွေနဲ့ ​ချော့ကလက်​ပူ​တွေကို ​ရှောင်​ကြဉ်​ရပါမယ်​။
အကိုက်​အခဲ​ပျောက်​​ဆေး : ​အ​အေးမိနှာ​စေး အကိုက်​အခဲ​ပျောက်​​ဆေး​တွေမှာ အိပ်​ချင်​ငိုက်​မြည်းခြင်း မဖြစ်​ရ​လေ​အောင်​ ကဖိန်းဓာတ်​ပါဝင်​တတ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​မှာ ​ရှောင်​ပါ။ ​ဆေးမ​သောက်​ခင်​မှာ ပါဝင်​ပစ္စည်း​တွေကို ဖတ်​ရှူ ကြည့်​ပါ။ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ​ဆေးဆိုင်​က​ဆေး​တွေဝယ်​မ​သောက်​ပဲ ဆရာဝန်​နဲ့ ပြသကာဆရာဝန်​ညွှန်​ကြားတဲ့​ဆေး​တွေကိုသာ ​သောက်​သင့်​ပါတယ်​။
​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​မှာ ​ကော်​ဖီကို လုံးဝဖြတ်​လိုက်​တာ ​အ​ကောင်းဆုံးဖြစ်​​ပေမယ့်​ မျှမျှတတ​သောက်​မယ်​ဆိုရင်​​တော့ ​ဘေးမဖြစ်​တတ်​ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ကော်​ဖီကို​လျော့ချင်​တယ်​ ဒါမှမဟုတ်​ ဖြတ်​ချင်​တယ်​ဆိုရင်​ ကဖိန်းနည်းနည်းနဲ့ အစားထိုး​သောက်​စရာ​တွေ ရှိပါတယ်​။
• လက်​ဖက်​ရည်​စိမ်း - လက်​ဖက်​ရည်​စိမ်း​တွေ၊ လက်​ဖက်​ရည်​ကြမ်း​တွေမှာ ကဖိန်းဓာတ်​အနည်းငယ်​မျှသာ ပါဝင်​ပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ နှပ်​​သောက်​ရတာမျိုးလည်​ မဟုတ်​တဲ့အတွက်​ ​ကောင်းပါတယ်​။
• အသင့်​​သောက်​​ကော်​ဖီ - နှပ်​​ကော်​ဖီထက်​ အသင့်​​သောက်​​ကော်​ဖီမှုန့်​လက်ဖက်​ရည်​ဇွန်​ တစ်​ဝက်​နဲ့ နို့နဲ့​ဖျော်​​သောက်​ခြင်းက ပို​ကောင်းပါတယ်​။
• ကဖိန်းဓာတ်​​လျှော့​ကော်​ဖီ - ကဖိန်းဓာတ်​အများကြီး​လျှော့ထားတဲ့ ​ကော်​ဖီ​တွေကို ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​မှာ ​သောက်​နိုင်​ပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင့်​ အဆုံးသတ်​မှာ​တော့ ​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ချိန်​မှာ ​ကော်​ဖီ​သောက်​ခြင်းဟာ မှားတာ​တော့မဟုတ်​​ပေမယ့်​ ​လျှော့သောက်​ဖို့​တော့ လိုပါလိမ့်​မယ်​။ သိချင်​တာရှိရင်​ ဆရာဝန်​နဲ့တိုင်​ပင်​​မေးမြန်းပါ။ ​ကော်​ဖီအ​ကြောင်းကို ​ကောင်း​ကောင်း​လေ့လာပြီး ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ကာလ ၉လအတွင်းမှာ ​ကော်​ဖီနဲ့ ဘယ်​လိုဖြတ်​သန်းမလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်​ကြပါ​စေ။
​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ကာလကို ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ ထပ်​ဆင့်​ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
ပငျပနျးနှမျးနယျလာတဲ့အခါ ကျောဖီပူပူလေးတဈခှကျ သောကျလိုကျခငျြစိတျဖွဈပျေါလာတာဟာ လူတိုငျးဖွဈလရှေိ့တဲ့ တောငျ့တခကျြတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကျောဖီဟာ စိတျကိုလှုပျရှားတကျကွှစတေတျတဲ့ အရာတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ စှဲလနျး တတျပါတယျ။ အိမျမှာ၊ အလုပျမှာ စိတျဖိစီးမှုတှေ မြားလာတဲ့အခါ ကျောဖီသောကျခငျြစိတျကို လှုံ့ဆျောလာပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကျောဖီသောကျသငျ့မသောကျသငျ့ဟာ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတိုငျးရဲ့ ဒှိဟဝိဝါဒတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။ ကလေးကိုလညျး မထိခိုကျစခေငျြသလို ကျောဖီကိုလညျး မဖွတျနိုငျ ဖွဈတတျပါတယျ။
>> ကျောဖီသောကျခွငျးဟာ ကိုယျဝနျကို ဘယျလိုထိခိုကျနိုငျသလဲ?
ကဖိနျးဓာတျဟာ ကျောဖီရဲ့အဓိကပါဝငျပစ်စညျး ဖွဈပွီး နှလုံးနဲ့သှေးကွောတှကေို ထိခိုကျစတေတျသလို အမြားအပွားသောကျသုံးတဲ့အခါ ကငျဆာပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈစလောနိုငျပါတယျ။
Polyphenolဆိုတဲ့ဓာတျဟာ ကိုယျခန်ဓာရဲ့ သံဓာတျစုပျယူနိုငျစှမျးကို တားဆီးပေးပွီး သှေးအားနညျးစနေိုငျပါတယျ။
• ကိုယျဝနျပကျြကစြခွေငျး : ကိုယျဝနျအစပိုငျးကာလတှမှော ကျောဖီအမြားကွီးသောကျခွငျးက ကိုယျဝနျပကျြကစြနေိုငျပါတယျ။
• ကလေးကွီးထှားမှုနှုနျးနှေးစခွေငျး : ကိုယျဝနျနှောငျးပိုငျးကာလမှာ ကျောဖီအမြားအပွားသောကျခွငျးဟာ ကလေးကွီးထှားမှုကို နှေးစနေိုငျပါတယျ။
• သှေးအားနညျးခွငျး : ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ကျောဖီသောကျသုံးခွငျးက သှေးအားနညျးစနေိုငျပွီး သှေးအားနညျးခွငျးကွောငျ့ ကနျြးမာရေးဆိုးကြိုးတှေ၊ နောကျဆကျတှဲတှေ အမြားအပွားဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။
>> ကျောဖီကို လုံးဝစှနျ့လှတျလိုကျသငျ့သလား?
မလိုပါဘူး။ ပုံမှနျပမာဏအတိုငျးသာသောကျမယျဆိုရငျ အန်တရယျ မရှိပါဘူး။ ကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ တဈနကေို ကဖိနျး ဓာတျ ၂၀၀မီလီဂရမျခနျ့ (၂၀၀မီလီလီတာ ၂ခှကျခနျ့) သောကျသုံးနိုငျတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ခှကျကွီးလလေေ ကျောဖီပိုမြားလေ ဖွဈတာကွောငျ့ ခှကျပမာဏကိုလညျး ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
ကျောဖီအမြိုးအစားနဲ့ ဖြျောနညျးကလညျး အရေးပါပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကျောဖီသောကျတဲ့အခါ
• နှပျကျောဖီထကျ အသငျ့ဖြျောကို ပိုသောကျသငျ့ပါတယျ။
• ပုံမှနျကျောဖီထကျ ကဖိနျးဓာတျမပါတဲ့ကျောဖီကို ရှေးခယျြပါ။
• အကွာကွီးနှပျထားတဲ့ ကျောဖီမှာ ကဖိနျးဓာတျပိုမြားတာကွောငျ့ ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။
>> ကဖိနျးဓာတျပါတဲ့ အခွားဖြျောရညျဘာရှိသေးသလဲ?
လကျဖကျရညျ : လကျဖကျရညျမှာ ကဖိနျးဓာတျအနညျးငယျပါပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနညျးငယျမြှသောကျခွငျးက ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှပေါတာကွောငျ့ အကြိုးရှိပမေယျ့ အမြားကွီးတော့ မသောကျသငျ့ပါဘူး။
ကိုလာ : ကိုလာမှာ ကဖိနျးဓာတျအပွညျ့ပါတာကွောငျ့ ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
ကာဗှနျပါတဲ့အခြိုရညျမြား : ဂတျဈပါတဲ့အခြို ရညျတှေ၊ ဆိုဒါတှနေဲ့ ဘာအန်တရာယျမှမရှိဘူးလို့ထငျရတဲ့ သံပရာဆိုဒါရညျတှမှောတောငျ ကဖိနျးဓာတျတှေ ပါဝငျနတောကွောငျ့ ဒီအခြိုရညျတှသေောကျမယျ့အစား သံပရာရညျလတျလတျဆတျဆတျသောကျပါ။
ခြော့ကလကျ : ခြေ့ာကလကျမှာလညျး ကဖိနျးဓာတျနညျးနညျးပါဝငျတာကွောငျ့ ခြော့ကလကျပါတဲ့ ခြော့ကလကျတောငျ့တှေ၊ သကွားလုံးတှေ၊ ရခေဲမုနျ့၊ ပေါငျမုနျ့ကိတျမုနျ့တှနေဲ့ ခြော့ကလကျပူတှကေို ရှောငျကွဉျရပါမယျ။
အကိုကျအခဲပြောကျဆေး : အအေးမိနှာစေး အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှမှော အိပျခငျြငိုကျမွညျးခွငျး မဖွဈရလအေောငျ ကဖိနျးဓာတျပါဝငျတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ရှောငျပါ။ ဆေးမသောကျခငျမှာ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို ဖတျရှူ ကွညျ့ပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဆေးဆိုငျကဆေးတှဝေယျမသောကျပဲ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသကာဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့ဆေးတှကေိုသာ သောကျသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကျောဖီကို လုံးဝဖွတျလိုကျတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပမေယျ့ မြှမြှတတသောကျမယျဆိုရငျတော့ ဘေးမဖွဈတတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကျောဖီကိုလြော့ခငျြတယျ ဒါမှမဟုတျ ဖွတျခငျြတယျဆိုရငျ ကဖိနျးနညျးနညျးနဲ့ အစားထိုးသောကျစရာတှေ ရှိပါတယျ။
• လကျဖကျရညျစိမျး - လကျဖကျရညျစိမျးတှေ၊ လကျဖကျရညျကွမျးတှမှော ကဖိနျးဓာတျအနညျးငယျမြှသာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နှပျသောကျရတာမြိုးလညျ မဟုတျတဲ့အတှကျ ကောငျးပါတယျ။
• အသငျ့သောကျကျောဖီ - နှပျကျောဖီထကျ အသငျ့သောကျကျောဖီမှုနျ့လကျဖကျရညျဇှနျ တဈဝကျနဲ့ နို့နဲ့ဖြျောသောကျခွငျးက ပိုကောငျးပါတယျ။
• ကဖိနျးဓာတျလြှော့ကျောဖီ - ကဖိနျးဓာတျအမြားကွီးလြှော့ထားတဲ့ ကျောဖီတှကေို ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ သောကျနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အဆုံးသတျမှာတော့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကျောဖီသောကျခွငျးဟာ မှားတာတော့မဟုတျပမေယျ့ လြှော့သောကျဖို့တော့ လိုပါလိမျ့မယျ။ သိခငျြတာရှိရငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျမေးမွနျးပါ။ ကျောဖီအကွောငျးကို ကောငျးကောငျးလလေ့ာပွီး ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၉လအတှငျးမှာ ကျောဖီနဲ့ ဘယျလိုဖွတျသနျးမလဲဆိုတာကို သိရှိနိုငျကွပါစေ။
ပြျောရှငျဖှယျကိုယျဝနျဆောငျကာလကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ထပျဆငျ့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
၂၀.၇.၂၀၁၉ | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ခံစားမှုရော၊ လုပ်ဆောင်မှုကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ sciatic nerve ဆိုတဲ့ အကြီးဆုံးအာရုံကြောကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောက ပေါင်နောက်ဖက်၊ ခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ ခြေဖဝါးတွေက ခံစားမှုအာရုံတွေကို ပေးပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောနာကျင်ရင် ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကို နာကျင်စေပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောက သားအိမ်အောက်...
နို့တိုက်နေတုန်း ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးတွေကို ရှောင်ဖုိ့လိုသလဲ
၁၆.၇.၂၀၁၉ | ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
နို့ထဲ အရက်​ပမာဏဘယ်​​လောက်​ပဲပါရင်​ က​လေးအတွက်​ စိတ်​ချရတယ်​ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး​နော်​။ အရက်​​သောက်​မိရင်​ နို့ထဲ အရက်​လုံးဝမပါ​တော့သည်​အထိကို နို့မတိုက်​သင့်​ဘူး။ ၅% ဘီယာ ၁၂​အောင်​စ (၃၅၅ml)၊ ၁၁% ဝိုင်​ ၅​အောင်​စ (၁၄၈ml)​၊ ၄၀% အရက် ​၁.၅​အောင်​စ (၄၄ml) ​သောက်​ထားရင်​ ၂...